Pilo kely : Zaho aloha tsy tafiditra anaty fanisana, firy amiko ny mitsabo tena amin'izao Azako antoka fa diso ireo fanisana rehetra avoaka ireo, mila manova tetik'ady ny mpitondra fa mety efa mihanaka io aretina io fa miandry tsy fanjariana kely amin'ny vatana fotsiny dia mamely. Ahibohy ireo marefo fa tena en danger, maro ny tsy mahatakatra ny saran'ny fitsaboana raha sanatria ka mihombo. Tafandria mandry ePatrick
Ilay tarehi-marika maneho ny isan'ny matin'ny Covid-19 no mivoaka hatrany, fa ireo ampolony maty vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra izany tsy tafiditra anaty kajy iny, satria tsy Corona no namono azy, fa tsy fahampian-drivotra noho ny fahatapahan'ny milina manome oxyzena. Tafandria mandry ePatrick
Atao rahampitso 08 aprily 2021 ny fihanianan'ireo sivy mianadahy mpikambana vaovao ao amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, hiasa mandritra ny 7 taona. Aorian'izay dia hiroso amin'ny fivoriana voalohany hisafidianan'izy ireo izay ho filoha. Ingahy RF no heno hatreto fa tsara toerana, na dia 5 vavy, 4 lahy aza ireo mpikambana. Tafandria mandry e.Patrick
Pilo kely : Ary angaha tsy ny mpanohitra indray no atao vakisiny voalohany Ireo mpanohana ny fitondrana indray no hita miazakazaka manao vakisiny iarovana amin'ny Covid-19 mialoha, misy mitsaitsaika manao vakisiny any ivelany, ary ny vahoaka Malagasy mba oviana ny azy ? Tafandria mandry ePatrick
Zaho ve no tsy naharaka fa toa tsy nisy médaille na fanomezam-boninahitra manokana ho an'ny rain'ny CVO akory, sa ve tsy sitraka ny zava-bitany namonjena ny Malagasy sy izao tontolo izao? Nodimandry ny sabotsy 27 martsa 2021, ary efa voalevina ny marainan'ny alahady 28 martsa ihany ny Profesora Randriantsoa Adolphe, tale jeneralin'ny IMRA Natural Products, teo amin'ny faha 71 taonany. Mpikambana ao amin'ny Akademia Malagasy izy, ary mpikambana ao amin'ny Filankevim-pitantanana Fondation Albert et Suzanne Rakoto Ratsimamanga. Tafandria mandry mandrakizay ingahy DGPatrick
Matoria fa vozaka tsy nisotro rano ilay arbitre Côte d'Ivoire sy Ethiopie. Tsy misy disqualification Ethiopie izany eo. Merci Barea. Bonne nuitPatrick
Antsoy matetika ihany Ray aman-drenintsika ho an'izay mbola manana, ry Papi, Mamie, Tonton, ry Tantine fa mafimafy izy ty. Mitandrema aby e, mila tony tsara. Bonne nuit.Patrick
Amin'izao amin'ny 9ora alina izao, anio zoma 26 martsa 2021, vao vita ny fihainoana ireo kandida 59 izay hisafidianana olona 2 hisolotena ny Filankevitra ambony ny mpitsara na Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana. Miala sasatra kely izao ny mpikambana, ary izay vao miroso amin'ny fandinihina ny fombafomba hitondrana ny fifidianana, izay vao mifidy, ary farany vao manisa vato. Raha ny nambara hatrany moa dia malalaka tsy misy tsindry avy any ambony ny safidy atao. Fa ny resaka heno aty anaty rindrina aty aloha dia misy soso-kevitra mavesatra mba hifidianana an'i ramatoa BGR sy atoa RF. Izay tsy voatery izy ireo aloha no ho lanian'ireo mpikambana raha tena sahy hijoro amin'ny safidiny izy ireo. Mety tsy ahandry anareo izahay fa dia tafandria mandry e.Patrick